Konke odinga ukukwazi ngemfundiso yezintambo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela uzwile ngoJehova umucu wentambo. Lokhu kungenye yemicabango ethakazelisa kakhulu emhlabeni wonke. Kwezesayensi kuzalwa imibono eyahlukahlukene ezama ukuchaza ukuthi kungani kunamaqiniso athile noma imiphumela. Kodwa-ke, i-string theory ingenye yezinto ezaziwa kakhulu futhi ezikhetheke kakhulu laphaya. Imayelana nani ngempela le mbono?
Lapha sichaza konke mayelana nale mbono nezici zayo, ukuze ekugcineni uzwe ngayo futhi wazi ukuthi imayelana nani.
1 Amandla endawo yonke
2 Ubukhulu bendawo yonke
3 String theory kanye nencazelo yayo
4 Izincazelo zobukhulu obungeziwe
Amandla endawo yonke
Kungumqondo okwazi ukuchaza umhlaba osizungezile. Njengoba kuhlale kucatshangwa ngobukhulu baleplanethi, bekucatshangwa ukuthi inezilinganiso ezingaphezu kwezintathu. Ubukhulu obaziwayo ububanzi, ukuphakama nobude. Noma kunjalo, i-Universe yakhiwe ngobukhulu obengeziwe. Ososayensi abaningi bebelokhu bachaza ukuthi amandla adonsela phansi asebenza kanjani futhi uma ngabe iLanga likude kangako, lingaheha uMhlaba.
Uma kukhona into enesisindo, isikhala esikuso sigobile. Lokho kugobeka yikho okuxhumana namandla adonsela phansi. Umhlaba unesisindo esithile ngakho-ke futhi ugoba isikhala. Ukugoba kwesikhala yikho okwenza into ihambe. Lokho kusho ukuthi, KuyiLanga ukuthi ngamandla alo adonsela phansi liyakwazi ukwenza uMhlaba unyakaze futhi elinenhlangano yokuhumusha.
Ososayensi bathanda U-Albert Einstein noTheodor Kaluza Bazama ukuhlanganisa inkolelo engaqoqa futhi ichaze wonke amandla ayisisekelo abusa indawo yonke. Ngaleyo ndlela bekuzophathwa njenge-equation ebalulekile engavula yonke iminyango. Amandla adonsela phansi achazwa njengeqoqo lamajika nokukhubazeka esikhaleni nesikhathi. Ngakho-ke, kwenziwa umzamo wokwenza enye i-equation yamandla kagesi.
Njengoba kunikezwe ukuthi isikhathi sesikhala besivele sisetshenziselwe ukuchaza amandla adonsela phansi, yini enye into engaba nomthelela wamandla kagesi kagesi? Njengoba kwakungekho okunye ukuyichaza, kwavezwa umbono wokuthi kunezilinganiso ezingeziwe. Lokho wukuthi, ukuze kuchazwe amandla kagesi kagesi, ubukhulu obuningi bekufanele bungeniswe endaweni yonke. Ngakho-ke, indawo yonke ibizoba nobukhulu obungu-4 hhayi okungu-3.
Ubukhulu bendawo yonke
Ngale ndlela, sizoba nobukhulu bomzimba obu-3 nesikhathi njengesilinganiso sesine. Lapho kufakwa amafomula ngobukhulu besine kwatholakala ukuthi konke kuphelele, kepha bekungasho ukuthi usethole ukhiye. Lokho wukuthi, uma kunezilinganiso eziningi endaweni yonke, kungani singaziboni? Umbono kwakufanele uchaze ukuthi kunezinhlobo ezahlukahlukene zobukhulu endaweni yonke. Kukhona ezinye ezinkulu okulula ukuzibona kanti ezinye zincane futhi zisongwe zodwa.
Ubukhulu obuncane bunosayizi omncane kangangoba awunakwa. Asikwazi ukuwabona. Yize kungenakuqondwa ngamehlo, kunezibonelo ezithile ezenza kube lula ukuqonda ubukhulu esingenakububona.
Yize ikhebula lingabonakala ngathi liyinto eyodwa-kithi kithi kusuka kude, siyazi ukuthi akuyona. Ikhebuli inobubanzi, ukuphakama nobude, okungukuthi, ubukhulu bomzimba esinabo empeleni yethu. Kodwa-ke, ngezintuthwane, ukuhamba ngale ntambo kukhulu ngakubuso obuthathu futhi kufinyeleleka ngokuphelele.
Umbono wososayensi uKlein uyinto efanayo, kodwa ngezinga elincane kakhulu. Ukube besiyizintuthwane ezincane impela, besingathuthela esikalini esincane sesikhathi sesikhala futhi sikwazi ukubona lezo zilinganiso ezingeziwe. Ubukhulu buhlala buhlanganiswe ngokwabo. Umbuzo oyinhloko ngukuthi, ngabe lezi zinhlelo zokusebenza ziyasebenza emhlabeni wangempela? Impendulo ithi cha.
Ngale mininingwane, ososayensi abakwazanga ukuba nemininingwane efana nobukhulu be-electron. Umqondo ukwazi ukuchaza indawo yonke ngombono ohlanganisiwe.
String theory kanye nencazelo yayo
Ososayensi banamuhla bakhuluma ngokwazi into encane, engahlukaniseki, futhi engahlukaniseki ekhona emhlabeni. Ake sicabange ukuthi sinebhola likanobhutshuzwayo. Yize kucatshangwa ukuthi ama-athomu iyunithi encane kunazo zonke ezingabonakala, Lezi nazo zakhiwa izinhlayiya ezincane ezinjenge-fermions kanye ne-bosons. Ama-Quark awuhlobo lwe-fermion olwenziwa ngama-proton. Ngaphandle kokukholelwa, ngaphakathi kwe-quarks singabona intambo encane yamandla edlidlizayo. Kuyintambo. Ngalesi sizathu, kwaziwa njengethiyori yochungechunge.
Lezi zintambo ezincane ziyefana nezensimbi yomculo futhi zingadlidliza ngezindlela ezihlukile. Ngokusobala ucezu oluyisisekelo kunazo zonke endaweni yonke. Izintambo yilokho esikubona endaweni yonke ngokuphelele, kusukela yonke into yakhiwe ngama-athomu nawo akhiwa ama-proton, bese kuthi, ama-quark, kanye nezintambo.
Le mbono-ke ingachaza umsuka wawo wonke amandla ayisisekelo endaweni yonke. Zonke izinhlobo zamandla zizoba nalezi zintambo ezidlidlizayo ngokufanayo. Ukubona ukuthi lokhu kuyasebenza yini bekufanele ngibavivinye ngezibalo ezinendawo yonke enobukhulu obuthathu. Kodwa-ke, lokhu kusebenza kuphela ngokuba nomhlaba onobukhulu obungu-10 nesikhathi. Uma sekunzima ukucabanga indawo yonke enezilinganiso ezine zomzimba, cabanga nge-10.
Izincazelo zobukhulu obungeziwe
I-String theory ichaza ukuthi kwenzekani emgodini omnyama nokuthi kwenzekani phambilini Big Bang. Lo mbono utshela ukuthi i-Big Bang ingaba umphumela wokuhlangana noma ukungqubuzana kwamayunivesithi. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi usebenzise izinto ezifana ne- izibungu ukwazi ukuhambela kwamanye amazwe. Ngenxa yalo mbono, besingazi ukuthi singaya kanjani endaweni yonke lapho impilo izokwelulwa khona lapho indawo yonke ifa.
Uma ngokuba nokushayisana kweBig Bang manje sinamandla amancane kunangaphambili. ungacabanga ukuthi lawo mandla athe xaxa aye kwezinye izilinganiso.
Noma kunjalo, akudingekile ukuba nombono ositshela konke okwenzeka endaweni yonke ngaleyo ndlela, ukuze siphile ngaphandle kwemfundiso yezintambo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Inkolelo yezintambo